त्यो एउटा दुःखद् अनुभव |
प्रकाशित मिति :2020-04-21 15:59:39
म आज यस्तो कुरा लेख्दै छु, जुन कुरा कुनै पनि केटी मान्छेले जीवनमा कहिल्यै लेख्नु नपरोस्, सुन्न नपरोस् र भोग्न नपरोस् ।
म ३३ वर्षकी भएँ । ११ वर्ष अघि अमेरिका आएकी हुँ । म मेरो आमाबुबासंगै अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बस्छु । काम गर्छु र पढ्दै पनि छु ।
मेरा आमाबुबाले मलाई नेपाली संस्कारमै हुर्काउनु भयो । अग्लो स्वरले बोल्नु हुन्न, कसैलाई ठग्न हुन्न, झुठो बोल्न हुन्न भन्नु भयो । आमाबुबाका यी कुरा मलाई हो जस्तै लाग्थे र लाग्छन् पनि । अनि म पनि आफू त्यसै त्यसै हुन सिके । कसैलाई नराम्रो गर्दा पाप लाग्छ भन्ने बुझाई रह्यो । र कहिल्यै कसैप्रति तुच्छ भावले हेर्न जानिन, हेर्दिन पनि।
२२ वर्षको उमेरसम्म नेपाली माटोमा हुर्के बढेकी मलाई अमेरिकाको ११ वर्षको बसाईले पनि परिवर्तन गर्न सकेन । यो मेरो कमजोरी हो या विशेषता मैले छुट्याउन सकेकी छैन । सायद देश अनुसारको भेष या मान्छे अनुसारको व्यवहार गर्न जानिन मैले । सकिन मैले । त्यसैले होला आज म यसरी बिक्षिप्त बनेकी, आफ्नै जीवनप्रतिको मोह छैन मलाई । जतिसुकै बेला आफैलाई सक्न मन लाग्छ । आज होइन, अहिले नै मरिदिउँ लाग्छ । तर पनि कुन शक्ति र समयले मलाई बचाइरहेको छ थाहा छैन ।
कैलाश भट्ट । मुटु भन्थे मैले उसलाई । मुटु भन्थेन मात्रै, मान्थे पनि । सायद यति छोटो पलको मिलन हुनुरहेछ हाम्रो । र त उसले जीवनमै नभुल्ने प्रेम गरिदियो मलाई । एउटा केटा मान्छेको प्रेममा नपरेकी मलाई कैलाशले गरेको प्रेमले पागल नै बनाइदियो । पागल पनि यस्तो कि जब म उसंग थिएँ, उसको स्पर्श, उसको बोली, व्यवहार र सामिप्यताले पागल बनाउथ्यो मलाई । लाग्थ्यो केटा मान्छे पनि यति मायालु हुन्छन् रु यतिसम्म माया गर्न सक्छन् रु यदि म उसको श्रीमती भएँ भने संसारमा मभन्दा भाग्यमानी अरु पनि कोही महिला होलान् त रु अनि उसंगै हुँदा हराउँथे उसको अंगालोमा । र अनेक सपनाहरू देख्न थाल्थे । हाम्रो विवाह, हनिमुन, छोराछोरी, घर परिवार । नेपाली पन, नेपाली मन ।…….. ‘ह्याप्पी फेमिली’को ।
तर आज सपना सबै टुटेका छन् । मन जलेको छ । विश्वासमा खडेरी परेको छ । हिजो उसले देखाएको माया र उसले गरेको प्रेम सम्झेर पागल भएकी छु म । एउटा मान्छे यति छोटो समयमा कसरी दुई थरीको हुन सक्छ । ठ्याक्कै उल्टो । दिन र रात जस्तो । हिमाल र तराई जस्तो । मैले प्रेम गरेको, विश्वास गरेको त्यो मान्छेको व्यवहार ९ महिनामै यति क्रूर ? यति निर्दयी ? यति लज्जास्पद ? सोच्नै सक्दिन कहिलेकसो त । तर पनि यो सबै नियती सम्झेर विश्वास गर्नुको विकल्प नै के छ र ?
म चाहान्थें मेरो हुनेवाला श्रीमान् अग्लो होस् । धेरै गोरो, धेरै कालो वा धेरै मोटे नहोस् । ठ्याक्कै नेपाली पाराको । मिजासिलो बोली होस् । पढेलेखेको र म जस्तै अरुलाई प्रेम गर्ने खालको । हो, कैलाशलाई भेट्नु अघि मैले प्रेम गर्ने र विवाह गर्ने केटाको बारेमा परिकल्पना गर्थें म ।
एउटा भारतीय र पाकिस्तानी साथीमार्फत भेटिएको मेरो जन्मभूमिको मान्छे कैलाश ठ्याक्कै त्यस्तै पाएँ । लाग्यो, मेरो सपनाको राजकुमार भेटें मैले । सायद भगवानले नै पठाइदिए उसलाई । मेरो आजसम्मको इमान्दारिताबाफत फल दिएका होलान् भगवानले । साथीहरूले पनि उसका बारेमा अति नै राम्रा कुरा गरेका थिए । त्यसैले पनि उसंग नजिक हुन र उसलाई विश्वास गर्न मद्यत पुग्यो मलाई ।
शुरुमा त फोनमै हो हाम्रो भेट भएको । भौतिक रुपमा भेट नहुँदै धेरै कुरा त फोनमै गरिसकेका थियौं । तर उसलाई नभेट्दासम्म विश्वास लागेको थिएन मलाई । तर कैलाशले विश्वास दिलाएरै छाड्यो मलाई । आफू इमान्दार नेपाली छोरो हुँ भन्यो । मनैदेखि तिमी मलाई मन पर्यौ भन्यो । आज, भोली, भरे कुरा हुँदाहुँदै मैले पनि उसलाई औधी मन पराउन थालेछु । उबिनाको जीवन कल्पना पनि गर्न छोडेछु ।
नेपालमा उसको घर, जिल्ला, जात, वैवाहिक स्थिति, प्रेम सम्बन्ध यी सबै कुरा सोधे मैले । एकपटक होइन, सयौं पटक । तपाईंसंग सम्बन्ध जोड्नु अघि यी कुराबारे प्रष्ट हुन चाहान्छु भने । आफ्नो पनि अहिलेसम्म कसैसंग प्रेम सम्बन्ध नरहेको बताएँ । उसले आफू अविवाहित र अरुसंग प्रेम सम्बन्ध पनि नरहेको भनेर विश्वास दिलायो । नेपालमा सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत, राष्ट्रियस्तरको भलिवल खेलाडी रहेको र भलिवल खेल्न अमेरिका आएपछि यतै हराएको बतायो । कैलाश यति सभ्य तरिकाले बोल्थ्यो कि उसले भनेका सबै कुरा हो जस्तै लागे मलाई । हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्न थाल्यौं । भेट, डेटिङ, कुराकानी, सपिङ यी त कति हुन् कति ।
प्राय हाम्रो कुराकानी फोनमा हुन्थ्यो । दिनमा ८ घण्टासम्म कुरा गरेका छौं हामीले । हर पल, हर दिन, हर सासमा मलाई उसको अभाव महसुस हुने । उसले पनि मलाई त्यसैगरी माया लाग्छ भन्थ्यो । उसले तिमीबिना बाँच्नै सक्दिन भन्दै पटकपटक विवाहको प्रस्ताव राख्यो । मैले अहिले नै हुन्न भने । हाम्रो विवाह पक्का हुन्छ, तर केही समयपछि भने । र हाम्रो सम्बन्धको कुरा मेरो परिवारलाईचाहिँ भनिदिए । उमेर पुगेकी छोरीले आफ्नो मातृभूमिको कुनै केटा मन पर्‍यो भन्दा उहाँहरूले पनि अस्वीकार गर्नु भएन।
हाम्रो सम्बन्धको करिब ३र४ महिनापछि मलाई कैलाशको पुख्र्यौली घर बैतडी, जात भट्ट र हाल काठमाडौंको स्वयम्भुमा छ भन्ने थाहा भयो, त्यो पनि फेसबुकबाट । अनि नेपालमा कैलाशको श्रीमती र छोरा छ भन्ने पनि खबर पाएँ । मैले कैलाशलाई सोधें ‘तपाईं विवाहित रहेको कुरा किन ढाटेको’ भनेर । उसले त्यसलाई सिधै इन्कार गर्‍यो । श्रीमती भनिएकी महिलालाई भाउजू र छोरालाई दाइको छोरा हो भन्यो । कसैले मजाक गरे होलान् भन्दै त्यसमा विश्वास नगर्न आग्रह गर्‍यो । मनमा कताकता चिसो पसे पनि उसको व्यवहारले मलाई विश्वास गर्न बाध्य बनायो । मैले फेरि त्यो कुरा सोध्न छोडिदिएँ ।
गत मंसिर महिनामा म नेपाल आउँदा स्वयम्भुमा रहेको उसको घर पत्ता लगाएर परिवारलाई भेट्न गएँ । त्यहाँ जाँदा उसका आफन्तका लागि थुप्रै उपहार पनि किनेर लगेकी थिएँ । जहाँ उसका दाजुभाउजू, आमा, आफन्त धेरैसंग मेरो भेट भयो । संगै खिचेका फोटा फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेकी थिए । अनि अमेरिका फर्किएपछि कैलाश एअरपोर्ट लिन पनि आएको थियो । र मेरो घरसम्मै छोडेर फिर्ता भएको थियो ।
एअरपोर्टबाट घर जाँदा उसले मलाई भन्यो कि, अबदेखि हामी फोनमा कमै कुरा गर्नुपर्छ भनेर । मैले यस्तोचाहिँ किन भन्दा चित्तबुझ्दो उत्तर दिएन । बरु फोनमा कमकम कुरा गर्न थाल्यो । कारण के रहेछ भन्दा उसको अदालतको समय आएको रहेछ । उसले अमेरिकाको अदालतमा उसलाई नेपालमा भूमिगत पार्टीले बस्न नदिएका कारण ज्यान जोगाउन अमेरिका बस्न चाहेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको रहेछ । अदालतमा उसको मुद्दाको उसको पक्षमा फैसला भएछ । अनि त कैलाश, कैलाश रहेन । जुनदिन फैसला भएको रहेछ, त्यही दिन उसले भन्यो, ‘तैंले सुनेको कुरा सही हो । म विवाहित हो । मेरो त नेपालमा श्रीमती र छोरा छ ।’ अनि शुरुदेखि नै मैले तपाईंलाई गरेको विवाह र प्रेमबारेको प्रश्नको उत्तरचाहिँ किन गलत त रु मलाई किन झुक्क्याएको रु किन प्रेमको गलत जालमा फालेको भन्दा उसले सहजै भन्छ, ‘यौन सन्तुष्टिको लागि । तिमीजस्ता त मेरा कति केटी छन् छन् । दायाँबायाँ बोलिस् भने नेपाल गुको बेला सिध्याइदिन्छु ।’
उसको यस्तो जवाफ र व्यबहार शुरुआतमा त बिश्वासै गर्न गार्‍हो भो । म निन्द्रामा छु कि ! नराम्रो सपना देख्दै छु कि जस्तो लाग्ने । अनि आफूलाई बेलाबेलामा चोमोट्थे मैले । तर के गर्नु सत्य स्वीकार गर्नुको विकल्प नै रहेन मसङ्ग ।
अब भने म उसका विगतका केही व्यबहार बारे सोच्न बाध्य भएँ । हाम्रो यति नजिकको सम्बन्ध हुँदा पनि उसको कुनै सामाजिक नेटवर्क थिएन । फेसबुक, ट्वीटर केही छैन, चलाउदिन भन्थ्यो । त्यस्तो किन भन्दा मन पर्दैन भन्थ्यो । तर उसले एउटा म्यासेन्जरमाचाहिँ मलाई जोडेको थियो । साथी बनौं भन्दा किन अरुलाई देखाउने गरेर साथी बन्न पर्‍यो भन्दै साथी बनेको थिएन । अहिले त त्यही म्यासेन्जर, फोन सबैतिर ब्लक छु म । उसका सबै सम्पर्क टुटेका छन् ।
अहिले म नेपालमा छैन । तर नेपाली समाज र संस्कारमा हुर्के बढेकी एउटा केटी मान्छेका लागि योभन्दा ठूलो पीडा के होला र ? प्रेमको नाटक गरेर विवाहका सपना देखाई ममाथि रजाइँ गर्ने कैलाशलाई मैले के सजाय दिन सक्छु ? एउटा परिपक्क केटीले अर्को एउटा परिपक्क केटालाई प्रेम गर्नु अपराध हो र ? मैले त उसलाई आफ्नो श्रीमान् ठानेर शरीर सुम्पें । तर बदलामा उसले मलाई मात्रै होइन, मजस्ता कयौं केटीसंग आफ्नो सम्बन्ध छ भन्दै यौनका लागि नै यो सबै नाटक गरेको बतायो । म अनि मजस्ता अरु केटी मान्छेका लागि यो सबै भुल्न सहज छ त ?
हो, अमेरिका पुगेपछि नेपाल बिर्सिने, आफन्त बिर्सिने, आफ्ना सम्बन्ध बिर्सिने अनि त्यो समाज र संस्कार बिर्सिनेहरु कयौं होलान् । अमेरिकामा जे गर्दा पनि नेपालका आफन्तले देख्दैनन्, देखे पनि अमेरिका पुगेको मान्छेका गल्ती सम्झिने झण्झट गर्दैनन् भन्ने ठानेर झुठो बोल्ने, आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध लुकाएर अर्काको जिन्दगीमाथि खेलवाड गर्ने अरू कैलाशहरू पनि छन् होला ।
म हृदयबाटै माफी माग्न चाहान्छु ती निर्दोष महिला जो कैलाशकी श्रीमती हुन् । जसलाई मैले मैले लाख कोसिस गर्दा पनि थाहा पाउन सकिन । यदि तपाईंको ठाउँमा म हुन्थे र मेरो श्रीमान्ले यस्ता सम्बन्ध बनाउदै हिंडेको थाहा पाउँदा आफूले टेकेको जमिन भासिएको महसुस त मैले पनि गर्थे । सात जन्म नछुट्टिने प्रण गरेको व्यक्तिबाटको यो धोकाले पक्कै पनि आफूलाई सम्हान गाह्रो हुन्थ्यो नै । तर तपाईं महान हो जसले दिनको आधाभन्दा बढी समय अर्कै महिलाको लागि खर्चिन्छ । अनि आफ्नै जीवन संगिनीलाई अर्कैको श्रीमती र आफ्नो सन्तानलाई अर्काको सन्तान भन्छ । कति बलियो हुनुहुँदोरहेछ तपाईं जसमा यस्तो झुठो सम्बन्ध जोगाउने असीम शक्ति छ । र लागिरहेछ कैलाशजस्ता श्रीमान्ले मजस्ता महिलामाथी खर्चिने समय र शक्ति आफ्नो श्रीमतीको लागि खर्चिन्थे भने कति सुमधुर र कालजयी हुन्थे होलान्,- श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध । त्यसर्थमा त तपाईं पनि दुस्खी नै त हो ।
म अमेरिकी नागरिक भएका कारण मसंग विवाह गर्ने लालचमा उसले यस्तो गरेको रे । के आफ्नो मात्रै स्वार्थका लागि अर्को कुनै व्यक्तिको जीवनमाथि यतिसम्म खेलवाड गर्न मिल्छ ? नेपालमा भूमिगत अवस्थाको कुनचाहिँ राजनीतिक दलले उसलाई नेपालमा बस्न दिएन ? नेपालमा उसको राजनीतिक, सामाजिक हैसियत के हो, जुन कुराले उसको ज्यान जोखिममा पर्‍यो ?
होला उसलाई नेपाल बस्न दिइएन । अमेरिकामा पनि पूर्ण नागरिक भइसकेको छैन । के अमेरिकी नागरिक बन्नकै लागि आफ्नो श्रीमती र छोरामाथि यस्तोसम्मको अपराध गर्न मिल्छ ? के उ अमेरिका पुगेकै कारण उसले मजस्ता केटीमाथि गरेका अपराध उसकी श्रीमती, छोरा र आफन्तलाई पाच्य हुन्छन् ? यदि मेरो ठाउँमा कैलाशकी बहिनी, छोरी वा अरू कुनै नजिककी नातेदारसंग अरू कुनै कैलाशले यस्तो गर्दथ्यो भने यो कैलाशको प्रतिक्रिया के हुन्थ्यो ? कैलाशका आफन्तको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्थ्यो ? के मैले आफ्नो मातृभूमिको मान्छेलाई माया गरेर विवाह गर्ने सपना देखेर पाप गरें ? कैलाश विवाहित पुरुष हो भन्ने थाहा पाएर उसलाई प्रेम गरेको भए आज मैले यति भन्न सक्ने हिम्मत राख्थें होला र ? अनि हिजो अस्तिसम्म कैलाशका दाजुभाइहरू जो कैलाशको हुनेवाला श्रीमती भनेर मसंग नेपालमा भेट हुँदा, फोन र अनलाइनमा घण्टौ कुरा गर्थे, अहिले उनीहरू किन गायब ? मेरो प्रश्न मात्रै त्यो कैलाशका लागि होइन, कैलाशजस्ता लाखौं, हजारौं कैलाशका लागि हो कि, ‘यदि मेरो ठाउँमा तपाईंकी छोरी भइदिएको भए ?’